के नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन फेसबुकले मद्दत गरेको थियो त ? | Lek Besika Bhakaharu - Online News Portal
क्याम्ब्रिज एनालिटिकासँग सम्बन्धित एक भारतीय कम्पनीका संस्थापकले भनेका छन् यसका सीईओ एलेक्जेन्डर निक्सले भारतीय चुनावलाई प्रभावित पार्ने कोशिश गरेका थिए । अवनीश राय एससीएल इन्डियाका संस्थापक हुन्, जो लन्डनमा एससीएल ग्रुप र ओव्लेनो बिजनेस इन्टेलिजेन्सका ज्वाइन्ट भेन्चर हुन् ।
अवनीश रायका अनुसार एलेक्जेन्डर निक्सले २०१४ को संसदीय चुनावअघि भारतको भ्रमण गरेका थिए र त्यसबेला सत्ताधारी कांग्रेस पार्टीलाई हराउनका लागि एक अज्ञात क्लाइन्टका साथ काम गरेका थिए । उक्त चुनावमा नरेन्द्र मोदीलाई निर्णायक जीत मिलेको थियो । मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ५४३ लोकसभा सिटमध्ये २८२ सिट जितेको थियो ।
केसी त्यागीको सम्बन्ध
केसी त्यागीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘अमरीशको कम्पनि गाउँमा कति जाती, कति बनियाँ, कति ब्राह्मण छन् त्यसको गणना धेरै गर्दछ । उसले ट्रम्पवाला चुनाव (अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव)मा भारतीय मुलका व्यक्तिहरुलाई जोड्ने काम गरेको थियो । र, हामी यस कुराको स्वीकार गर्दैआएका छौं । तर, के हामीले फेसबुकलाई भनेका छौं कि त्यहाँ गडबडी गर भनेर ? त्यहाँ फेसबुकबाट गडबडी भयो भने त यहाँ यसको विरुद्ध कुनै अपराधको मुद्दा बन्दैन ।’
भारतमा तथ्यांकको सुरक्षालाई लिएर गम्भीर चासो छ, के भारत जस्तो ठूलो देशमा सोशस मिडियाको तथ्यांकमा आधारित जानकारीको प्रयोग गरेर चुनावलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ ?
एससीएल भारतमा के गर्छ ?